SSB oo Puntland ugu baaqday inay ciidamo gayso Ceerigaabo [Waraysi Xadhigle]
Thursday September 27, 2018 - 20:59:13 in Wararka by Super Admin
Isbuucii hore waxaan sii danay Waraysi uu bixiyay G/xigeenka Labaad ee siyaasada Ururka SSB Abwaan Cabdi Xadhigle oo ku Sugan Dalka Maraykanka. Waraysigaasi hore wuxuu kaga hadlay sida ay u arkaan hadal dhawaan ka soo yeedhay Maamulka Hargaisa ee
Isbuucii hore waxaan sii danay Waraysi uu bixiyay G/xigeenka Labaad ee siyaasada Ururka SSB Abwaan Cabdi Xadhigle oo ku Sugan Dalka Maraykanka. Waraysigaasi hore wuxuu kaga hadlay sida ay u arkaan hadal dhawaan ka soo yeedhay Maamulka Hargaisa ee ahaa Safarkii madaxda PL ee G/Sanaag
Waraysigan qaybtiisa 2-aad wuxuu kaga hadlay Magaalada Ceerigaabo & Beelaha degen & weliba sida xalka lagu gaadhayo, isaga oo ugu baaqay C/rxmaan Maxamed C/laahi Cirro Gudoomiyaha xisbiga Mucaraadka ah ee Waddani inuu fara-galin ka daayo Beelaha Wada-degen Gobolka Sanaag.
Mr Xadhigle wuxuu kaloo iftiimiyya in aanay ka fursanayn in Puntland Ciidamo gayso Xuduuda Gobolka Gaar ahaan Magaalada Ceerigaabo.
Qaybtii 1-aad Waraysiga Riix Halkan